bt-auto bulletek auto LED-ka warshad nalka hore ee LED-ka soo saaraha - Guangzhou Bullettek Electronics Technology Co., Ltd.
Iftiinka hore ee LED
Guangzhou Bulletek Electronics Technology Co., Ltd. (oo loo yaqaan BT-AUTO) waxay ku taal Guangzhou, Shiinaha.Waxaan si xirfadaysan ugu hawlannahay nalalka LED-ka ee auto-nalalka muddo sanado ah.Waxaan siinaa adeeg heersare ah oo la habeeyey (OEM iyo ODM) macaamiisha.
Alaabooyinka LED-ka ee BT-AUTO waa kuwo deggan oo leh waxqabad sare.Waxaan ballaarinaynay noocyada alaabta nalalka LED-ka, si aan u daboolno baahiyaha macaamiisha.
BT-AUTO waa Adeeg Hal-Stop ah, Noocyada kala duwan ee alaabtayadu waxay buuxin karaan codsiyada macaamiisha intooda badan.Kooxdayada iibka iyo adeegga ee khibradda leh, waxaan awoodnaa inaan xaqiijinno aaminaaddayada "Customer First, Service Foremost".
BT-AUTO waxay ku takhasustay suuqyada caalamiga ah ee iftiiminta baabuurta muddo sanado ah.Waxaan dhisnay xiriir ganacsi oo joogto ah macaamiisha dalal badan iyo meelo badan, sida Yurub, Ruushka, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya iyo wixii la mid ah, waxaanan ku guuleysanay sumcad wanaagsan.Waxaan si daacad ah u soo dhaweyneynaa la-hawlgalayaal gaar ah oo ka socda adduunka oo dhan.
BT-AUTO tayadiisu had iyo jeer way ka sarraysaa.Waxaan wadnaa Xakamaynta Tayada adag ee habraac kasta, sida: Tijaabada heerkulka sare iyo kan hoose, tijaabada kulaylka u adkaysta, tijaabada gabowga, tijaabada biyuhu, tijaabada boodhka, tijaabada danab sare iyo hoose ee degdega ah, iwm.
BT-AUTO firfircoonideedu waa hal-abuurnimo.Waxaan u heellannahay cilmi-baarista iyo horumarinta, waxaan sii wadnaa soo saarista alaabada cusub si joogto ah.
BT-AUTO, lagu kalsoonaan karo.
BT-AUTO taariikhda iftiinka iftiinka
Wax soo saarka BT-AUTO
Waxaan nahay koox dhalinyaro ah oo firfircoon, xirfad leh iyo sidoo kale khibrad.
Waxaan bixinaa adeegyo heer sare ah oo ay la socdaan alaabada ugu sareysa ee macaamiisheena.
Dhaqankeennu waa hal-abuurnimo.Waxaan u heellannahay R&D, waxaan sii wadeynaa soo saarista alaabada cusub si joogto ah.
Aaminaadayadu waa "Customer First, Service First".
BT-AUTO, Lagu Aamino
Shirkadda: Guangzhou Bulbtek Electronics Technology Co., Ltd.
blog ugu dambeeyay
[TOUR] Safar 1 maalin ah oo ku socda harada Jingshan, Qingy...
[PRODUCT] Isbarbardhigga Halogen, HID, Spe...
[wax soo saarka & HAWLADA] BT-AUTO Kooxda 2 ...
[ALIBABA] Alibaba Super Sebtembar tartanka...